China Mpanamboatra sy mpamatsy Apple | Heritage
Yantai dia manana tantara lava momba ny fambolena paoma ary toerana voalohany indrindra amin'ny fambolena paoma any Shina.
Ny sakafo lova dia mampiasa ny paoma avy any Yantai miaraka amin'ny vokatra Geographic Indication.
Mamy ny paoma maina ary manana tsiro tena manokana mandroso amin'ny teknolojia lova.
Ny paoma maina dia misy vitamina mety hahasoa ny vatana. Ny paoma dia misy vitamina A sy C. Ireto vitamina ireto dia manampy amin'ny fitazonana ny taolana sy ny hoditra ho salama. Ny paoma koa dia misy vitamina B be dia be. Ireo vitamina ireo dia mifehy ny metabolisma voajanaharin'ny vatanao ary mamelona ny atinao sy ny hoditrao.
Ny paoma maina dia manampy amin'ny fahasalamanao noho ny mineraly. Ny potasioma dia mineraly iray tena ilaina amin'ny fiasan'ny neurons sy ny ati-doha. Izy io koa dia misy vy, raha ny filazan'ny Institute of Dried Apples, izay mamatsy paoma maina antsasaky ny kapoaka, 8% amin'ny takiana vy isan'andro ho an'ny lehilahy ary vy 3% takian'ny vehivavy. Mampiasa io vy io ny vatana mba hamoronana sela mena vaovao. Ny sela mena dia tompon'andraikitra amin'ny fandefasana oksizenina amin'ny sela. Ho fanampin'izany, ny paoma maina dia misy mineraly hafa toy ny varahina, manganese ary selenium.
Ny paoma maina dia afaka manafoana na mampihena ireo soritr'aretina mahazatra toy ny hoditra maina, manapotipotika, malemy, ary aretina maro maharitra sy maharitra.
Tsara homarihina fa io fahaizan'ny paoma maina io dia noho ny fisian'ny riboflavin (vitamina B2), vitamina C ary A, mineraly toy ny vy, manezioma, calcium ary potasioma.
Fanitsiana ny tosidra
Ny fihinanana paoma maina sy ny paoma maina fofona aza dia mety hampihena ny tosidra. Hitan'ny fandinihana fa fofon'ny paoma maina iray monja no nampidina ny tosidran'ny marary.
Ny fahasalaman'ny siligaoma
Ny asidra hita ao amin'ny paoma maina dia mamono bakteria mandritra ny fitsakoana ny nify sy ny siligaoma. Ny mitsako paoma maina dia toy ny mampiasa borosy nify voajanahary. Asehon'ny fandinihana fa ny paoma maina dia afaka manadio ireo sombin-tsakafo sisa tavela amin'ny nify sy hihy ary misoroka ny aretin'ny nify sy ny siligaoma. Na ireo izay efa nijaly tamin'ny siligaoma aza dia afaka mahazo vitamina C be dia be amin'ny paoma maina.
Ny otrikaina ao amin'ny paoma maina dia manamafy ny firafitry ny nify. Manamafy ny enamel-nify izy ary misoroka ny nifiny tsy ho be.
Ny mitsako paoma maina dia mampatanjaka ny hozatry ny valanoranony. Ny paoma maina dia fanasana vava tsotra sy voajanahary nefa tsy misy additives noho ny vokadratsy fanoherana azy.
Fanatsarana ny fitadidiana
Paoma maina manatsara ny fitadidy. Noho izany dia ilaina ho an'ireo manao asa ara-tsaina. Amin'ny ankapobeny, ny paoma, noho ny phosphore, dia manamafy ny hozatra sy ny fitadidiana.
Teo aloha: Voankazo voankazo tsy ampy rano